ကုန်ကြမ်း Methenolone Acetate အမှုန့်ထုတ်လုပ်သူ & ပေးသွင်း - စက်ရုံ
ကုန်ကြမ်း Methenolone Acetate အမှုန့် (434-05-9)
Methenolone Acetate အမှုန့်တိုးပွားလာပိန်ကြွက်သားထုထည်ကိုအားပေးကာယဗလအသုံးပြုထားတဲ့ထိုးဆေး / ပါးစပ်ဟို Steroid တစ်မျိုးဖြစ်၏ ကြွက်သား, လေလွတားဆီးနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်မှုနှင့်အစွမ်းသတ္တိကိုမြှင့်တင်ရန်။
ကုန်ကြမ်း Methenolone Acetate အမှုန့် (434-05-9) ကဗီဒီယို
ကုန်ကြမ်း Methenolone Acetate အမှုန့် (434-05-9) ဖျေါပွခကျြ
ထို့အပြင် primobolan အဖြစ်လူသိများကုန်ကြမ်း Methenolone Acetate အမှုန့်, သူက dihydrotestosterone မှဆင်းသက်လာကာအန်ဒရိုဂျင်ဟို Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ပြီးလေ့အားနည်းအန်ဒရိုဂျင်ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူအစားထိုးထားတဲ့ပါးစပ် Steroid တစ်မျိုးအဖြစ်တွေ့ရှိရပါသည်။ ဒါဟာရိုးတွင်းခြင်ဆီရောဂါနှင့်သွေးအားနည်းရောဂါ၏ကုသမှုများအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပြီးဒါဟာသူ့ရဲ့17α-alkylated analog နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက၎င်း၏အဆင့်မြင့်ကုထုံးထိရောက်မှုနှင့်အောက်ပိုင်း Hepatic အဆိပ်များအတွက်ပိုမိုနှစ်သက်သည်။ Metenolone acetate 1961 အတွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသုံးပြုမှုများအတွက်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့မကြာခဏဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြွက်သားအစွမ်းသတ္တိကိုတိုးမြှင့်အဖြစ်စွမ်းဆောင်ရည်များနှင့်ရန်လိုမြှင့်တင်၎င်း၏စွမ်းရည်၏လူ့အားကစားအတွက်စော်ကားခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာ racehorses အတွက်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးမြှင့်နိုင်စွမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ကုန်ကြမ်း Methenolone Acetate အမှုန့် (434-05-9) Specifications
ထုတ်ကုန်အမည် ကုန်ကြမ်း Methenolone Acetate အမှုန့်
ဓာတုအမည် NSC-74226; SH-567; စတုရန်းမိုင်-16496; premobolan
အမှတ်တံဆိပ် NAmE Primobolan, Nibal
မူးယစ်ဆေးအတန်းအစား အန်ဒရိုဂျင်; ဟို Steroid တစ်မျိုး; အန်ဒရိုဂျင် Ester
CAS အရေအတွက် 434-05-9
InChIKey PGAUJQOPTMSERF-QWQRBHLCSA-N ကို
မော်လီကျူး Formula C22H32O3
မော်လီကျူး Wရှစ် 344.49
အရည်ပျော် Point 138-139 °
Storage Temperature -20 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ
Application တစ်ဦးဟို Steroid တစ်မျိုးအဖြစ်
ကုန်ကြမ်း Methenolone Acetate အမှုန့် (434-05-9) ကဘာလဲ?
ထို့အပြင် primobolan အဖြစ်လူသိများကုန်ကြမ်း Methenolone Acetate အမှုန့်, သူက dihydrotestosterone မှဆင်းသက်လာကာအန်ဒရိုဂျင်ဟို Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ပြီးလေ့အားနည်းအန်ဒရိုဂျင်ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူအစားထိုးထားတဲ့ပါးစပ် Steroid တစ်မျိုးအဖြစ်တွေ့ရှိရပါသည်။ ဒါဟာရိုးတွင်းခြင်ဆီရောဂါနှင့်သွေးအားနည်းရောဂါ၏ကုသမှုများအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပြီးဒါဟာသူ့ရဲ့17α-alkylated analog နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက၎င်း၏အဆင့်မြင့်ကုထုံးထိရောက်မှုနှင့်အောက်ပိုင်း Hepatic အဆိပ်များအတွက်ပိုမိုနှစ်သက်သည်။ Metenolone acetate 1961 အတွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသုံးပြုမှုများအတွက်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့မကြာခဏဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြွက်သားအစွမ်းသတ္တိကိုတိုးမြှင့်အဖြစ်စွမ်းဆောင်ရည်များနှင့်ရန်လိုမြှင့်တင်၎င်း၏စွမ်းရည်၏လူ့အားကစားအတွက်အသုံးပြုသည်။
ဘယ်လိုကုန်ကြမ်း Methenolone Acetate အမှုန့် (434-05-9) အလုပ်များ
Methenolone DHT တစ်ဆင်းသက်လာဖြစ်ပါတယ် (သို့မဟုတ်ထို့ထက် ပို. တိကျသောဖြစ် - DHT တစ်ဖွဲ့စည်းပုံပြောင်းလဲပုံစံဖြစ်ပါတယ်) ။ ဒီဟော်မုန်းရဲ့ဟိုသဘောသဘာဝတိုးမြှင့်ဖို့ကူညီပေးသည်ဖြစ်သောကာဗွန်တဦးတည်းနှစ်ဦးမှာတစ်ဦးကဆက်ပြောသည်နှစ်ဆနှောင်ကြိုး, ပါဝင်သည်။ ဒါဟာအစ Hepatic ပျက်ပြားကနေကာကွယ်ပေးသည်တစ်ခုထပ်တိုး 1-methyl အုပ်စုတစ်စုသယ်ဆောင်။ အဆိုပါ acetate ၏ရှေ့မှောက်တွင် Ester နောက်ထပ် Hepatic ဇီဝြဖစ်ကနေကာကွယ်ပေးသည်။
ကုန်ကြမ်း Methenolone Acetate အမှုန့် (434-05-9) သောက်သုံးသော
ခံတွင်း Primobolan (Methenolone Acetate): - ပါးစပ် Primobolan နှင့်အတူထိရောက်သောထိုးဖြစ် 50mg နေ့စဉ်အကွာအဝေး Beginner Primobolan အသုံးပြုသူများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်အဆိုပါ 100 ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ အလယ်အလတ်အသုံးပြုသူများအ 100 ၏အကွာအဝေးအတွင်းပါးစပ် Primobolan running လူသိများကြသည် - ကြီးမြတ်ရလဒ်များကိုနှင့်အတူနေ့စဉ် 150mg နှင့်အဆင့်မြင့်အသုံးပြုသူများအ 150 ၏အကွာအဝေးကိုတွေ့လိမ့်မည် - နေ့စဉ် 200mg အတော်လေးထိရောက်သောဖြစ်။ Primobolan ၏ပါးစပ်မူကွဲ hepatotoxicity မဆိုအတိုင်းအတာကိုတင်ပြမနှစ်ခုကိုပါးစပ်ဟို steroids (နှုတ် testosterone Undecanoate အုပ်ချုပ်သောအခြားဖြစ်ခြင်း Andriol) ၏တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်, ပါးစပ် Primobolan မြင့်မားဆေးများအမှန်ပင်အသုံးပြုသွားမည်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမယ့်ပါးစပ် Primobolan နေဆဲအသည်းထဲမှာဇီဝြဖစ်နှင့်ပြိုကွဲဖို့ခုခံတဲ့အတိုင်းအတာဝင်စားပါဘူး, ဒါ Primo ထံမှ hepatotoxicity ၏အန္တရာယ်ကိုလုံးဝအထူးသဖြင့်အဖြစ်ကိုလျစ်လျူရှုမရရမည်ဟုမှတ်ချက်ပြုရမည်ဖြစ်သည် အဆိုပါပါးစပ်ပုံစံ၏ Primobolan ဆေးများပိုမိုမြင့်မားခြင်းနှင့်ပိုမိုမြင့်မားသောပမာဏအထိတိုးမြှင်နေကြသည်။
virilization ၏အနည်းငယ်သာအန္တရာယ်နှင့်အတူ 50mg နေ့စဉ်အကွာအဝေး - ပါးစပ် Primobolan ကနေစွမ်းဆောင်ရည်များနှင့်ကောင်တိုးမြှင့်ထုတ်ယူနိုင်ရန်ရှာဖွေနေအမျိုးသမီးအသုံးပြုသူများ 75 အတွက်နှစ်သိမ့်ခြင်းနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်ကိုတွေ့လိမ့်မည်။
ကုန်ကြမ်း Methenolone Acetate အမှုန့် (434-05-9) အကျိုးခံစားခွင့်
Primobolan (Methenolone acetate) ကာယဗလနှင့်အဘို့အသေခံရန်နေသော၎င်း၏ယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အကျိုးခံစားခွင့်များကြောင့်အားကစားသမားများတို့တွင်အများဆုံးထင်ရှားသည် steroids တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာ Steroid တစ်မျိုးသံသရာတစ်စုံလင်သောဆေးတစ်လက်အဖြစ်အများအပြားအားဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ ကအနည်းငယ်မျှသာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်ပါဝင်သည်ထားတဲ့မရေမတွက်နိုင်သောအကျိုးကျေးဇူးများကိုနှင့်အတူကြွလာကြောင့်ပါးစပ် steroids အသုံးပြုတဲ့အခါထိုကဲ့သို့သောအသည်းပျက်စီးမှုကို, အဆိပ်နှင့်အခြားအသည်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအဖြစ်ကိစ္စများရန်အလွန်အထိခိုက်မခံသို့မဟုတ်ကျရောက်နေတဲ့နေသောသူအပေါင်းတို့ကိုအားကစားသမားများနှင့်ကာယဗလများအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်၏
ဒါဟာခွန်အားနဲ့စွမ်းအင်အဆင့်ကိုပြုစုပျိုးထောင်အတွက်ကူညီပေးသည် - အသုံးပြုသူများ bulk သံသရာအတွင်းမှာတိုးမြှင့်တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိနှင့်စွမ်းအင်အဘို့ဤဒြပ်ပေါင်းပေါ်ရေတွက်လို့ရပါတယ်။ ဒါဟာစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု၏အရေးပါသောအသှငျအပွငျဖြစ်သည့်နိုက်ထရိုဂျင် retention ကိုခွင့်ပြုခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
ထို့အပြင် muscles- ဒီတည်ဆောက်ခြင်းအတွက်①Aidsနိုက်ထရိုဂျင် retention ကိုမှတက်ကထပ်ပြောသည်။ ကြွက်သားအဆောက်အဦနိုက်ထရိုဂျင်ကပါဝငျနှင့်နိုက်ထရိုဂျင် retention ကိုအတွက်အကူအညီပေးနေတာသည်, Steroid တစ်မျိုးအသစ်ကကြွက်သားတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်အဟောင်းသောသူတို့ကိုဆက်ပြီးများအတွက်သင့်လျော်သောအခွအေနေအရွက်။
catabolic မှုတွင်၏အန္တရာယ်ကဒီ Steroid တစ်မျိုးစျေးကွက်အတွက်အလုံခြုံဆုံးတဦးဖြစ်လူသိများနှင့်သုံးစွဲသူများမရှိတော့ catabolic တုံ့ပြန်မှုစိုးရိမ်ရန်ရှိသည်နေသည်②Minimizes။
③Itအဆီနှုန်းတိုးပွါး breakdown- ဒီသည်၎င်း၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါသည်, ဖြတ်တောက်ခြင်းသံသရာအတွက်အကူအညီပေးနေတာ။ ဒါဟာပြန်ကြွက်သားအဆောက်အဦးအတွက်ကူညီပေးသည်သောခြုံငုံခန္ဓာကိုယ်အဆီလျှော့ချခြင်းနှင့်သုံးစွဲသူများက '' အစွမ်းသတ္တိကိုတိုးမြှင့်အတွက်ကူညီပေးသည်။
Buyaas.com ထံမှ Methenolone Acetate အမှုန့်ကိုဝယ်
ကုန်ကြမ်း Methenolone Enanthate အမှုန့် (303-42-4)